FLAS – African Studies Program – UW–Madison
The African Studies Program encourages students of African languages to submit applications for Summer 2016 and Academic Year 2016-2017 fellowships and awards. Application deadline is February 15, 2016. FLAS fellowships are funded by the U.S. …
Posted in Fellowships, Funding, Graduate Students, LanguagesTagged FLAS, undergraduatesLeave a comment
Explore Summer 2016 domestic and international African language programs
Plan your summer African language study with this helpful list of domestic and international language programs. Summer 2016 domestic and international programs The link takes you to a Google spreadsheet that also includes tabs with …
Posted in Funding, Graduate Students, Research, TravelTagged FLAS, summer, undergraduatesLeave a comment
Explore Summer 2015 domestic and international African language programs
Plan your summer African language study with this helpful list of domestic and international language programs. Summer 2015 domestic and international programs List of overseas African language programs that FLAS students have attended in the …
Posted in Fellowships, Funding, Graduate Students, LanguagesTagged FLASLeave a comment
Explore Summer 2013 domestic and international African language programs
The Center for African Studies at the University of California, Berkeley, has put together a helpful resource for students looking for summer African language programs. One document includes a list of overseas African language programs …
Posted in Awards, Fellowships, LanguagesTagged FLASLeave a comment